लायन्स मोडल भिलेज संवृद्ध बनोस् - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार १२:३५
लायन्स क्लवले गोरखा नगरपालिका १० वीरेञ्चोकस्थित तीनघरेमा लायन्स नमूना बस्ती(लायन्स मोडेल भिलेज) बनाउन सुरु गरेको छ । जसका लागि पाँच बर्षभित्र पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि एक करोड रुपैयाँको कार्यक्रम प्रदान गरेको छ ।
सो लायन्स मोडलभिलेजमा लायन्स क्लवको सहयोगबाट १२ घरमा घरबास(होमस्टे) सञ्चालनमा छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहयोग क्लवले गरेको हो । जस्तै होमस्टेमा टपरी प्रयोग गर्नका लागि टपरी बनाउने उद्योग क्लवले प्रदान गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिन एवं स्थानीयबासीको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बंगुर पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, खेतीपातीलाई जोड दिने उद्देश्यले त्यहाँका किसानहरुलाई क्लवले हाते ट्याक्टर दिएको छ । बाँझो रहेको जग्गा जोतेर आयआर्जन गर्ने, फलफूलको बिरुवा रोप्नेलगायतका कामका लागि पनि लायन्स क्लवले सहयोग प्रदान गरेको छ ।
सो गाउँलाई नमूना गाउँ बनाउनका लागि लायन्स क्लवले वाह्य र आन्तरिक लायन्सहरुसँग सहयोग जुटाएको हो ।
पुस्तौँदेखि ‘तीनघरे’को नामले परिचित सो गाउँको नाम अब परिवर्तन भएर लायन्स मोडल भिलेज बन्दैछ । पहिचान फेर्दै छ । ‘पहिचान’ र ‘विकास’लाई तराजुमा राखेर हेर्दा स्थानीयबासीले ‘विकास’ को पल्ला भारी पाए ।
विकासको जिम्मा लायन्स क्लवले लिएको छ । अब स्थानीयबासीको आकांक्षा(महत्वकांक्षा) बमोजिम लायन्सल क्लवले त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा मद्धत गर्नुपर्ने छ । भौतिक बस्तुको सहयोग भन्दा पनि होमस्टेमा आउनेहरुलाई गर्ने मौलिक आतिथ्यताको तौर तरिका पनि सिकाउनु पर्नेछ ।
अहिलेको पुस्ताका पाहुनाको मनोविज्ञान बुझेर सहज, सुपाच्य सेवा दिने तरिकाका बारेमा पनि सिकाउनु पर्नेछ । होमस्टेको काम नगर्नेका लागि पनि विभिन्न खालको सहयोग मिलोस् ।
सबैखाले सहयोग गरी तीनघरे गाउँ संवद्ध बनोस्, शुभकामना ।
मावन सेवा आश्रम भवन निर्माणका लागि र्आिर्थक सहयोग